အရွယ်အစားသေးငယ်သည့် ၀ န်ဆောင်မှုစက်ရုံနှင့်ပေးသွင်းသူများ | Donghua
DHUA သည်စျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်အရည်အသွေးမြင့်သောပလတ်စတစ်ထုတ်လုပ်ခြင်းကိုပြုလုပ်သည်။ ပိုလီယို၊ ပိုလစ်စရီရင်းနှင့်အခြားစာရွက်များစွာကိုဖြတ်တောက်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်မှာသင်သည်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကိုလျှော့ချရန်နှင့် acrylic (သို့) ပလတ်စတစ်ထုတ်လုပ်သည့်လုပ်ငန်းတစ်ခုစီ၏အောက်ခြေအဆင့်ကိုချွေတာရန်ဖြစ်သည်။
စာရွက်ပစ္စည်းများတွင်အောက်ပါတို့ပါ ၀ င်သည်။
• Extruded သို့မဟုတ် Acrylic သွန်းလောင်း
•ထို့အပြင် - ကျေးဇူးပြု၍ စုံစမ်းပါ
Pနောက်ဆုံးစာရွက်များ Cut to Sကဗျာ နှင့် Fabrication န်ဆောင်မှုများ
DHUA သည်အမျိုးမျိုးသော thermoplastic sheet material options နှင့်သင့်ထုတ်လုပ်မှုလိုအပ်ချက်များအားလုံးအတွက်အဆင့်မြင့်ဖြတ်တောက်ခြင်းဖြေရှင်းချက်အမျိုးမျိုးကိုပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်မှာသင်သည်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကိုလျှော့ချရန်နှင့် acrylic (သို့) ပလတ်စတစ်ထုတ်လုပ်သည့်လုပ်ငန်းတစ်ခုစီ၏အောက်ခြေအဆင့်ကိုချွေတာရန်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်မြင့်မားသောတိကျမှန်ကန်သောဖြတ်တောက်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုသွေးစွန်းနေသည့် CNC နှင့်လေဆာဖြတ်စက်များဖြင့်ထောက်ပံ့ပေးသည်။ သင်နှစ်သက်သောမည်သည့်အရွယ်အစား၊ ပုံသဏ္,ာန်နှင့်မဆိုသင်၏နှစ်သက်သောပုံရိပ်၊ ဆောင်ပုဒ်၊ လိုဂို၊ ကိုးကားမှုစသည်တို့ကိုဖြတ်တောက်နိုင်သည်။ ရိုးရှင်းသောစာရွက်မှသည်ရှုပ်ထွေးသောပုံနှင့်တံဆိပ်ကပ်ခြင်းအထိတစ်ခုတည်းသို့မဟုတ်စီးရီးထုတ်လုပ်ခြင်းအထိ - ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖြတ်တောက်ခြင်းအစရှိသောပစ္စည်းကိရိယာများဖြင့်ဖြစ်နိုင်သည်။
လေဆာဖြတ်တောက်ခြင်း & CNC အလုပ်
လေဆာဖြတ်ခြင်း ၎င်းသည်ပထဝီအနေအထားအရရိုးရှင်းသောအပြင်ရှုပ်ထွေးသောအရာဝတ္ထုများအတွက်အလွန်တိကျသောအသေးစိတ်တိကျမှုဖြင့်ကြိတ်ဆုံနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်လေဆာဖြတ်ထားသောပလတ်စတစ်ပစ္စည်းများ၏အနားစွန်းများသည်တောက်ပသောအချောဖြင့် - လေဆာဖြတ်ထားသော acrylic သို့မဟုတ်ထုံးစံဖြတ်ထားသော plexiglass ဥပမာ။ ၎င်းသည်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်မြင့်မားပြီးမည်သည့်ရှုပ်ထွေးသောအဆင့်တွင်မဆိုစီမံကိန်းများကိုကိုင်တွယ်နိုင်သည်။ လေဆာဖြတ်စက်သည် acrylic ကဲ့သို့သောအရာများအနားတွင်တောက်ပသောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်။
CNC ဖြတ်တောက်အလွန်အသေးစိတ်တိကျမှုဖြင့်ကြိတ်ခွဲနိုင်သည့်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနှင့်ရှုပ်ထွေးသောအရာများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ CNC ထက်အခြားမည်သည့်ဖြတ်တောက်ခြင်းသို့မဟုတ်ထွင်းထုသည့်စက်သည်အစိုင်အခဲပစ္စည်းများပေါ်တွင်ပိုမိုကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိပါ။ CNC ဖြတ်စက်နှင့်အတူလိုအပ်သောကုန်ပစ္စည်းကိုအထူးအရွယ်အစား၊ ပုံသဏ္andာန်နှင့်ထူးခြားသောဖန်တီးမှုဒီဇိုင်းဖြင့်ပုံစံပြုနိုင်သည်။
စိတ်ကြိုက်ဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့်ထွင်းခြင်း (လေဆာနှင့် CNC ဖြတ်တောက်ခြင်း)
တိကျသောဖြတ်တောက်ခြင်း - Angle ဖြတ်ခြင်း၊ Bandsaw ဖြတ်၊ ပုံစံများ၊ စက်ဝိုင်းဖြတ်တောက်ခြင်း
ထုတ်လုပ်မှု & စည်းဝေးပွဲ
ကုန်ပစ္စည်းဒီဇိုင်း & အင်ဂျင်နီယာ
Cut-to-Order Acrylic သို့မဟုတ်အခြားပလတ်စတစ်ပြားများ
Laser ဖြတ်တောက်ခြင်းအလုပ်အတွက် AI ဖိုင်သို့မဟုတ် PDF ဖြစ်သည်
အရည်အသွေးမြင့်ပလတ်စတစ်များ, စိတ်ကြိုက်ထုတ်လုပ်မှု. ယနေ့ Quote တောင်းခံပါ! သင်၏စီမံကိန်းအတွက်သင်လိုအပ်သည့်အရာများကိုဒီဇိုင်းဆွဲရန်နှင့်ဖန်တီးရန်ကျွန်ုပ်တို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပါပြီ။
အရွယ်အစားအထိဖြတ် acrylic ဥယျာဉ်ကြေးမုံ
အရွယ်အစားအထိဖြတ် acrylic ကြေးမုံ
အရွယ်အစားအထိ acrylic ကြေးမုံစာရွက်
လေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းများအတွက် Glitter acrylic စာရွက်
အရွယ်အစားရန်ဖြတ်ကြေးမုံ acrylic စာရွက်